Miyaad Jireen Qalabka Tooska ah ee Knights? - 1aviagem.com
Dhejiyay 5 December 2019 by Rômulo Lucena
Iyo sii wadida qoraalkii hore, waxaa wali la waayey waxyaabo aad u muhiim ah oo lagaaga hadlayo Riga. Sida xaqiiqda ah in magaaladu u muuqato inay qorrax u hesho iyada uun. Hadana heerkulku aad uma kululaado. Waxaan dhihi lahaa dareen wanaagsan inta u dhaxaysa heerarka 18 iyo 26 ee bisha Abriil. Iyada oo leh jawi iswaafaqsan markay qorraxdu dhacdo.
Aqal galbeedka dhabta ah
Hagaag, sidoo kale waxaan uga tagey xoogaa ukumo fudfudud bogagii hore. Mawduuca maanta ahna waa:
Dhab ahaantii 'Knights Templar' ma runbaa?
Mise waxay ahaayeen halyeeyo taariikhi ah oo qayb ka ahaa sheeko caan ah? Mise waxay ahaayeen abuurista istuudiyaha Hollywood?
In kasta oo DC horeba u leedahay madaxbadeeda madow ...
Tani waa waxa aan maanta kuugu soo qaadano qoraalkan.
Xaq ma u ogtahay? Sidii hore oo kale, bartilmaameedkayagu wuxuu ku yaal bartanka dhexe ee magaalada hore. (dhagsii halkan si aad wax uga aqriso).
Oo intii aan sugayay baska dalxiiska inuu ka tago barta, ayaan ku fiiriyey dhinaca hore ee wejiga guriga madow.
Oo waxaan arkay in taallada ugu muuqata ay aad ugu egtahay taallada xornimada. Iyagu isku mid ma ahan, laakiin waa isku mid.
Iyo wajiga waxaad horay u arki kartaa inuu jiro shukaansiga sanadka 1334. waa soo jiidasho leh in la yiraahdo ugu yar. Ma aqaan hadii ay aniga kaliya aniga tahay, laakiin waayihii hore dadku waxay umuuqdeen inay runtii danaynayaan dhismayaasha. Maalmahan waa isku mid, dhammaan labajibbaarane iyo muraayadaha indhaha. Ficil wanaagsan Art Nouvau wuxuu keenay maskaxdan ah sheegida sheekada meesha. Oo farshaxannada saqafyada dushooda waxay wataan calaamadda meesha. Sidoo kale ogow jaakadaha gacmaha ee tiirarka weyn, waxay macno ahaan u noqon doontaa “furaha” sheekadeena.
Kadib baska wuxuu bilaabay inuu ka hadlo taaladaan. magiciisu waa Roland oo isagu ma ahan wax aan ka aheyn amiir dabayl culus oo difaacay boqortooyada Riga.
Dabcan waan ban baxay markaan maqlay maqalka baska!
Tan kaliya maahan, qaar ka mid ah maraakiibtiisa ayaa la sheegay inay ku qulquleen webiga Daugava iyaga oo aad u fara badan oo maalkoodii ku qaatay boqornimadii boqorka Faransiiska oo deyn weyn Roland ku lahaa.
Meesha ay maraakiibta Roland ku daateen
Waxyaabaha la yaabka ahna halkaa kama joogsan doonaan. Roland ka sokow waxaa jiray kuwo kale oo wax ku garaacaya Templar oo difaaca Riga. Haa, taalladahan kale waxay noo horseedaan inaan aaminsanahay in qarnigii saddex iyo tobnaad uu ahaa Knights Templar kale oo meeshan ku soo urursaday. Maxay qof walboo wadaagaan? Waxay ahaayeen mindiyo ama Amazons, badiyaa keli ah, iyagoo leh nidarro quduusnimo ah oo ku soo wada ururay guriga madowga (laga yaabee xaflad yar) waqti ka waqti.
Roland aasaasaha Riga.
Maalintii xigtayna waxaan sameeyay socod kale oo ay mar labaad kaga hadlayaan Roland. Taasi oo loo tixgeliyey inuu yahay geesi isla markaana ah maamuuska magaalada. Intaa waxaa dheer, wuxuu ahaa qof kasoo jeeda safka Emperor Charlemagne (qarnigii sagaalaad) (oo ahaa Faransiis) isla markaana aad u ballaariyey Boqortooyada si aad ah ayaa loogu magac daray Boqortooyada Carolingian. Marka Roland waxay mas'uul ka ahayd qalcaddii Riga. Waxayna lahayd sharaf badan. Waqtigaas wixii ka dambeeyay magaalada Riga waxaa horay u ahaa astaan ​​qalcad iyo laba furayaal isgoysyada Wadadii loo maro waxay muhiim u ahayd ganacsiga gobolka.
Oo kanu wuxuu ahaa shaabaddii magaalada qarnigii saddex iyo tobnaad.
Shaambada Riga. Qarnigii 13aad
Shaabadda ayaa isbeddelaysa oo heshay macnaha. Waxay ku bilaabatay furayaasha, ka dibna qalcad ku taal asalka ilaa ay ka dambeyso dambe (11), oo ah isla xaadirkan gaashaanka tiirarka Roland.
Markaa, Knights Templar kale oo isna difaacay magaalada ayaa xaq u leh inay adeegsadaan shaabaddan.
Laakiin yuu ahaa marxaladaha 'Knights Templar'?
Hagaag, aniga oo maskaxda ku haya xogtaan oo dhan iyo maalin maalmaha ka mid ah magaalada waxaan go aansaday inaan qoto dheer u qoro sheekadan oo dhan. Mana jirto meel ka wanaagsan oo lagu baadho sheeko wanaagsan marka loo eego maktabadda. Marka waxaan go aansaday inaan halkaas aado.
Ka fikir meel qurux badan! Waxay ahayd maktabadda ugu weyn ee aan abid noloshayda galo. Nasiib darrose waqti yar baan ku haystay halkaas, maxaa yeelay waxaan xiray 18: 00h (Waxaa jira wax ka badan dabaqyada 4 iyo kuwa sameeya safarka ugu horreeya waxaa jira dib-u-dhac saf dheer ah oo ku saabsan safarka, ama enchantment with gudaha ee shaqadan farshaxan, waxaan leeyahay, maktabaddaan Oh haa, oo hel af ingiriis ah oo aan fahmi karo halkii ay ka ahaan lahaayeen Laativian, oo ah luuqadda maxalliga ah.
Laakiin halkaas waxaad ku xaqiijin kartaa qaar ka mid ah sheekooyinkaas.
Dunida 'Knights Templar' way jirtay! Ama sidii loogu talagalay ayaa loogu yeeri lahaa: “Amarka Liitayaasha Saboolnimada Masiixa iyo Macbudka Sulaymaan.
Magacan oo dhammi waxay ka timaadaa nidarrada quduusnimada, faqriga, is-caabinta, iyo addeecidda ay leeyihiin. Waxaa loo sheegay inay yihiin kuwa aan dhiman karin sidaas darteedna haddii ay u maleeyeen in qof la dilayo ay tani tahay doonista Masiixa. iyo qayb ka mid ah "Macbudka Sulaymaan." Waxay ku egtahay meesha amarku ka jiray. Waxay kor fuuleen buurta macbudka Sulaymaan ku yaal. Jid ahaan, Sulaymaan kaliya maahan boqor kitaabiga ah, laakiin waxaa lagu sheegaa inuu yahay kan ugu caqliga iyo hodansan ee boqorrada oo dhan oo uu ku jiro Boqor Daa'uud. Marka ahaanshaha 'jilitaanka Masiixa ee liita iyo macbudka Sulaymaan' sidoo kale waxay keenaysaa xigmad iyo barwaaqo.
Muddadii jabhaduhu waxay ahaayeen kuwo dagaal muhiim ah. Waxay heleen caan iyo caado. Markii hore waxay ku noolaayeen tabaruc ka yimid dadka maxalliga ah iyo boqorro adeegyadooda ilaaliya si ay Yeruusaalem u aadaan.
Xaqiiqdii xaalado badan oo xargaha ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu ogeysiiyo in xitaa qalcaddiias ama magaaladaas dadka iyo alaabtooda safarka ah ee tagaya Yeruusaalem ay gaareen.
Gaar ahaan waxay shaqaaleeyeen adeegooda boqorada Yurub iyo boqorada Mongol. Waxaa jiray tuugag iyo tuugag badan, oo boqorro badniina waxay la socdaan maalkoodii badnaantooda. Ilaaliyaha shaqsiyeed ma uusan aqoon isla aqoonta dhulbahante sida mindiyaha. Sidaa darteed, qaar ka mid ah jilbaha leh aqoonta istiraatiijiyadda iyo dagaalka ayaa go'aansaday inay isbaraan oo ay u samaystaan ​​amarkan sharaf leh ee Templars-ka.
Ujeeddadooduna waxay ahayd, Innaba iyaga yaanay noqon, Rabbiyow, laakiin ammaanta magacaaga. Isagoo ka soo labisan dharka iskutallaabta caanka ah ee Maltese wuxuu ka yimid asal cad. Waa kuwee halkan Brazil markii ugu horeysay ka soo muuqday Vasco da Gama Caravel. Waxaan dhihi lahaa halkaan waxaa laga yaabaa inuu ahaa Templar Knight! Ama Amarka Bortaqiiska cusub ee ka soo baxay Templars-ka. Tan iyo markii la mamnuucay adeegsiga magaca hore.
Eeg faahfaahinta oo keliya: Laanqeyrta Cas (Maltese), Xilliga Qaska, xirfadaha duulimaadka, raacida dadka… kalsoonida boqorka… dhammaan waa calaamado wanaagsan in ay haa tahay waxaa laga yaabaa inuu ahaa Templar.
Wali kuma qanacsana waxaan go aansaday inaan booqdo matxafyada qaarkood. Midkii ugu horreeyay wuxuu ahaa St. Peter's Cathedral. Xaqiiqdii, waxaan moodayay inaan booqan doono cathedral, laakiin markii aan halkaa gaadhay waxaan ogaaday in dhismuhu noqday matxaf. Waxyaabaha ugu horreeyayna waxaa la ii sheegay in dhammaan wajiga bannaanka magaalada, oo ay ku jiraan gurigii madowga, dib loo soo celiyay. Wax kasta oo aad aragtay ilaa hadda waa la burburiyey intii lagu jiray dagaalkii koowaad iyo kan labaad ee dunida. Laakiin iyada oo ahmiyada la siinayo dalka iyo tabarucaadka, wax walba waa la soo celiyay, marka laga reebo Statate-ka St Peter iyo Powder Tower. Kuwani waxay noqon doonaan qaab-dhismeedka kaliya ee sida qumman u sii jiray ilaa qarnigii saddex iyo tobnaad. Halkaasna cathedral-ka waxaad ku arki kartaa tiirarkii asalka ahaa ee ay burburiyeen qaraxyadii.
Hagaag, wali sheekada Templar-ka, ka fikir inay lacag deyniyaan boqorrada! Xusuusnowna in Roland ay lahayd khadka 'faransiiska'.
Qalcaddii Riga waxaa lagu dhisay lacag aad u fara badan, qaybna waxay ka timid Templars-ka halkaas ku soo ururay. Taariikhyahannadii madxafka ayaa sheegaya in boqorka Faransiiska, Philip IV oo loo yaqaan "qurxoon", uu lacag badan ku lahaa Templars-yada, kaliya maahee laakiin Pope Clement. Deyntu waxay ahayd mid aad u weyn oo khatar gelisay sharafnimada boqortooyadii Faransiiska. Oo Pope ma uusan jeclaan sheekadan dadka ee ku beddelaya quduusiinta ee kaniisadda leh mindiyo quduuska ah. Kadib maalin jimce ah, Oktoobar 13, 1307 wuxuu boqorku amar ku siiyay in dhammaan Templars-ka boqortooyadiisa la xidho. Sidaa daraadeed waxay yiraahdeen nasiib xumada Jimcaha 13. Kaniisadda Katooliga, oo sidoo kale lumisay doorkeedii gaarka ahaa iyo karaamadii nolosha aaminka. Wuxuu ku dhammaaday taageerida boqorka Faransiiska sidaas darteedna "kaniisadda qoduus" iyada oo loo marayo amarkii papal wuxuu amar ku bixiyay in la laayo oo la xasuuqo. Kadib iyaga oo ku hadlaya magaca Pope Clement iyo King Philip ee Faransiiska waxay bilaabeen cadaadiskii Templars. Kaliya maaha muuqaal ahaan, laakiin sidoo kale khiyaano.
Tusaale wanaagsan waa astaanta cawlan. Guryaha madax madow.
Calaamadaha Heerkulka Qadiimiga ah
Sababta oo ah eedeynta baadiyaha ah ee ah inay madaafiicda halkaas jiraan, waxaa jiray qol halaag oo wacdiyey khaniisnimada, ficilo ay sameeyeen khaniisiin keliya. Markhaati ahaanna waxaa lagu shaabadeeyey sumaddeeda qof kasta oo raba inuu arko. Templars-kii ayaa beddelay astaantii. Kahor, waxaa jiray laba mindiyood oo faras saaran, oo calaamad u ah in mindida Templar ah ay u qalmaan labo, sidaana ay ahayd awooddiisa dagaalka. (Ma taqaanaa Batman iyo Robin? Haa, sidaas oo kale) Laakiin ka dib eedeynta Pope-ka waxay ka saareen mindiyo, iyagoo u eg kan maanta.
Iyagoo fiirinaya inaysan ka adkaan karin xoogaggooda isku dayaya inay duulaan ku qaadaan Riga, ayay ku sameeyeen shaashadda hoos ku xusan:
"Haddii aan dhinto, kaalay oo mar kale dhiso." Taas micnaheedu waa: Haddii aan halligo, kaalay oo mar kale i dhis.
Waa wax lala yaabo in la ogaado in diiwaangelintii dhab ahaan la qabtay. Guriga waxaa la furay 1.333 markii ugu horeysay. Waxay ka dhammaatay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, laakiin dib ayaa loo dhisay 1999. Sababtaas awgeedna waxa jira laba taarikh oo furitaan ah oo ku yaal guryaha madowga.
Waxa kale oo uu soo maray, sida cad wuxuu sidoo kale silcin jiray Kaniisadda Kaatooligga, oo ah dib-u-habeyn aad u yaqaanna Mudaaharaadka. Martin Luther.
Taasi waa, haddii sheekadu ku saabsan tahay iimaan oo ay ku lug leedahay la dagaallanka kaniisadda, ka dib waxay sii dhex mareysaa Riga.
Oo sidee buu u yahay gurigan madaxa madow?
Hagaag, waa qiso weyn, markii aan halkaas joogay waxaa loo xiray xaflad. Marka waa la iisoo diray. Laakiin waan ku mashquulay hoolka dhexe ka hor intaan ilaaliyayaashu i soo jiidin. (Kama sii raadsan kartid xitaa taariikhda taariikhda meela nabdoon).
Hadana tani waa uun meesha loo dalxiiso inta hartay! Ma caawin karo laakiin waxaan xasuustaa Wayne Mansion oo leh marinnada qarsoon iyo marinnada. Tilmaamaha socdaalka ayaa sheegaya in intii lagu jiray dib-u-dhiska la helay dhowr dardaaran oo oggolaanaya in lagu xiro guriga Blackheads guryaha ku hareereysan, kaniisadda iyo dekedda markabka. Oo waxaa la helay oo keliya sababtoo ah dib-u-dhiska waxaa ku jiray qoditaanno lagu beddelayo aasaaska guriga, kaas oo lagu burburiyey 1941 markii la qarxiyay intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Oo sidee sheekadii Roland u soo afjartay?
Nasiib darrose wuxuu ka mid ahaa mindiyooyinka aan gurigiisa ugaga tegin asaga oo matalaya Pope ama Boqorka.Taageera ahaan Riga wuxuu doortay inuu halkaas joogo oo aakhirkii la xiray, dacwad lagu oogay, ugu dambeyntiina lagu gubay barxadda dhexe.
Erayadii ugu dambeeyay ee mindida Roland ayaa yidhi:
Filibos, Clement! Maan gelin wax danbi ah oo la i khiyaaneeyo sidan oo kale. Marka waxaan kuu baryayaa in sanad gudihiis labadiinaba aad ila xisaabisaan xisaabtiina ilaah hortiisa! Wixii ay igu sameeyeen aawadood.
Wuuna dhintay ...
Waxa xiiso leh, waxay yiraahdeen Boqorka Faransiiska bil kadib ayuu dhintey! Lix bilood kadibna Popeku wuu dhintay! Waxaas oo dhan, inta lagu guda jiro muddada sanadka 1.
Akhristeyaasheyda sharafta leh, waa cudurka daacuunka ee Roland.
Sheekadanna waxaa laga aqrin karaa St. Peter’s Cathedral ee Riga.
Miyaad dhihi doontaa taasi maahan meesha ugu wanaagsan? Inaad waardiye noqoto waxyaabahaas ayaa leh.
Intaanan dhammaysan waxaan jecelahay inaan salaanta uga tago saaxiibkay Zé, maxaa yeelay isagu waa qofkii ugu horreeyay ee igala hadlay jiritaanka Templars ka baxsan adduunka ee filimada. Ama laga helo DC Comics.
Tanina waxay ahayd natiijada safarkii ugu horreeyay ee aannu u tagnay Riga talo bixinno iyo waxa la booqdo. gal marinkii hore halkan.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysatay, haddii aad jeceshahay inaad na raacdo badhanka casaanka oo aad saaxiibbadaa la wadaagto sheekadan oo farshaxanimada nolosha ku dayacan tahay.
taariikhda Batman Laydhka taariikhda Riga Roland saddex iyo tobnaad Goobjoogeyaal
Kumaa yaa sheegay inaysan dhibi karin #travel? Ayaa akhrinaya #travel iyo soo jeedinta aqrinta #1aviagem? 1aviagem.com #fiqueemcasa #leia #travel #stayAtHome #read #travelthroughtheworld
Kaliya aniga igu fiiriya #eyes aan doonayo inaan weeraro! #cat #playing ay #loveit